टच नै नगरी फिल्म सकिएछ – News Portal of Global Nepali
14th May 2018 मा प्रकाशित
प्रमिला थापा, सचिव महिला संघ, मोरङ
राजनीति गर्ने व्यक्तिले अरुसँग आर्थिक सहयोग माग्न थाल्यो भने उसले नैतिक धरातल गुमाउने मोरङ महिला संघ सचिव प्रमिला थापाको भनाइ छ । राजनीतिका अलावा उनी ब्युटिसियन पेसामा पनि क्रियाशील छिन् । भन्छिन्, ‘मानिसमा इच्छाशक्ति भयो भने उसले धेरै काम गर्न सक्छ ।’
‘सेतो बाघ’ चलचित्रमा जेठी महारानीको भूमिका निर्वाह गरेकी प्रमिलाको सोख गायनमा पनि छ । लेखन विधिमा कमै रुचि राख्ने प्रमिलाले राजनीति, व्यवसाय र घरपरिवारलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेकी छन् । प्रमिलासँग कुमार राउतले गरेको कुराकानी :
० तपाईं राजनीतिक कार्यकर्ता कि व्यवसायी ?
– राजनीति मेरो प्यासन हो, पेसाले म ब्युटिसियन हुँ । घरपरिवार, प्यासन र पेसालाई एकैपटक अघि बढाइरहेकी छु ।
० तीनतिर हात हाल्दा सफल होला र ?
– मेरा बुबाको प्रेरणाले नेपाली कांगे्रसको राजनीति छोड्न मन लाग्दैन । बुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, म विद्यार्थी जीवनबाटै नेविसंघको राजनीतिमा हुर्कें । अरुसँग हात थापेर राजनीति वा घर चल्दैन, त्यसैले आफूले जानेको पेसा अपनाएँ । एउटी महिलाले गृहस्थ पनि हेर्नैपर्छ । यी सबै कुरा एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले इच्छाशक्ति भयो भने गर्न नसक्ने कुरा केही रहेनछ भन्ने लाग्छ ।
० पार्टीले के जिम्मेवारी दिएको छ ?
– महिला संघ मोरङकी सचिव हुँ, मोरङ अन्तरपार्टी सञ्जालकी अध्यक्ष पनि हुँु । यद्यपि काम गर्नलाई पद चाहिन्छ भन्ने होइन, तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलको गतिविधिले जनतामा निराशा बढाएको छ । अर्थात् स्तरहीन राजनीति हाबी हुँदै गएको छ ।
० स्तरहीन राजनीति भनेको ?
– पार्टी संगठनमा मेहनत नगर्ने, पैसा बुझाएर शीर्ष नेताको चाकडी गरे पार्टीमा जुनसुकै पद पाइन्छ भन्ने सोचको विकास भइरहेको छ ।
० एउटा उदाहरण दिनुस् न ?
– स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मेदवार केन्द्रले तोक्न थाल्यो । स्थानीय तहको नेता छान्ने जिम्मेवारीसमेत केन्द्रले लिएपछि निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूको मनमा ठेस लाग्छ ।
० टिकट नपाएको तुष हो कि ?
– म उम्मेदवारको आकांक्षी थिइनँ । मभन्दा सिनियर दिदीहरूले नै टिकट नपाएको अवस्थामा मैले पदको आकांक्षा राख्नु गलत हुन्छ । मैले प्रवृत्तिको विरोध गरेकी हुँ, टिकट नपाएको तुष पोखेकी होइन ।
० महिलालाई राजनीति गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
– महिलाको राजनीतिक जीवनलाई माछोको जीवनचक्रसँग दाँजेकी छु । ठूला र बलिया बांगाले कमजोरलाई हुर्कन दिँदैन, जसरी समुद्रमा ठूलोले सानो माछाको जीवन हुर्कन नपाई अन्त्य गरिदिन्छ, ठीक त्यसरी नै महिलाको राजनीति पनि अन्त्य गराइन्छ ।
– ०४३ सालदेखि नेविसंघमा आबद्ध थिएँ, ०४५ सालदेखि संगठनमा आबद्ध भएँ । एकाइ सदस्य भएर नेविसंघको संगठन विस्तारमा लागें । पद नभए पनि नेविसंघभित्र म लोकप्रिय थिएँ ।
– माइतीघरमा आमा विरामी हुनुभयो । त्यसबेला भर्खर आईए पास गरेकी थिएँ । ०५२ सालमा सन्तान हुर्काउँदा मेरो राजनीति ओझेलमा प¥यो । झन्डै १० वर्षपछि पुनः नेपाली कांगे्रसको राजनीतिमा सक्रिय भएँ ।
० नेविसंघको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर कसले हुटहुटी लगायो ?
– मेरा बुबा कांगे्रस राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ उच्च पदमा पुग्नु त भएन, तर अनुशासित कांगे्रस हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पे्ररणाले म विद्यार्थी जीवनबाटै कांगे्रस राजनीतिमा आस्थावान हुन पुगें ।
० त्योबेलाको कांगे्रस कार्यकर्ता अहिले भ्रातृसंस्थाको सचिव मात्रै ?
– बीचमा झन्डै १० पार्टी कामलाई निरन्तरता दिन सकिनँ । पेसामा स्थापित भइसकेपछि घरपरिवारको सहयोगमा पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएँ । पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि निष्ठाको राजनीतिमा रुचि छ ।
० केका लागि र कसका लागि राजनीति ?
– देश र समाज परिवर्तनका लागि राजनीति गरेकी हुँ । कांगे्रसको आदर्शलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्दै महिलालाई मूलधारमा ल्याउन म पुनः राजनीतिमा फर्किएकी हुँ ।
– राजनीतिको डिक्सनेरीमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन । त्यसैले अहिले केही निराश देखिए पनि यसलाई सच्चाउँदै लैजानुपर्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो र पारदर्शी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईं हामी युवाहरूको काँधमा छ ।
० कांगे्रस पार्टी त लथालिंग छ होइन ?
– तपाईंले भनेजस्तो लथालिंग छैन, नेतृत्वबाट केही कमीकमजोरी भए होलान्, त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ । कांगे्रसलाई सिद्धान्त र विधिविधानअनुसार डो¥याउन युवा समुदायले खबरदारी गरिराख्नुपर्छ ।
० ब्युटिसियन पेसामा कसरी संलग्न हुन पुग्नुभयो ?
– एसएलसी दिएपछिको खाली समयको सदुपयोग गर्दै ब्युटिसियन तालिम लिएकी थिएँ । बुबाले नै २० वर्षपछि काम लाग्छ, तालिम लिइराख भन्नुभएको थियो । ०५९ सालमा ससुराले घरमै सर्टर बनाइदिनुभयो । र, काम थालें ।
० आम्दानी राम्रै हुन्छ ?
– यो सोभर पेसा हो । ब्युटिसियन पेसा धेरै मार्जिन बस्ने आम्दानीको राम्रो स्रोत हो । लगानी थोरै आम्दानी धेरै मात्र होइन, कोठाभित्र संगीत सुन्दै आरामले गर्ने पेसा पनि हो । त्यसबाहेक मैले ४–५ सयलाई तालिम पनि दिइसकेकी छु । मसँग तालिम लिएका झन्डै चार दर्जनले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।
० यो व्यवसायले परिवार पाल्न सकिन्छ ?
– पछिल्लो समयमा आममानिसमा राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने सचेतना फैलिएको छ । त्यसैले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेर चारजनाको परिवार सजिलै पाल्न सकिन्छ ।
० तपाईंले पाल्नुभएको छ ?
– ससुराको पेन्सन छ, उहाँले घर हेर्नुभएको छ । श्रीमान्को व्यापार छ । मैले कमाएको पैसा बचत हुन्छ । आफूसँग बचत भयो भने केही गर्ने आँट आउँदो रहेछ ।
– हामी सँगै पढेका हौं, झन्डै चार वर्षजति लभ परेपछि एरेन्ज विवाह गरेका हौं । हाम्रो अहिले छोराले आईटीको अध्ययन सक्यो भने छोरी बीबीए दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछिन् ।
० लभ त लामै परेछ नि ?
– अहिलेको जस्तो टपरटुइँया लभ थिएन, हाम्रा पालामा । अनुशासित लभ हुन्थ्यो । अहिले त एउटासँग चारवटासम्म लभ गरिरहेका हुँदा रहेछन् । धेरैजसो हाम्रो फोनमा कुरा हुन्थ्यो । ससुराबुवा टेलिफोन अफिसको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले फोनमा कुरा गरेको पैसा लाग्दैन थियो ।
० के देखेर मन पराउनुभयो ?
– सँगै पढ्ने साथी, टेलिफोनमा कुरा हुन थालेपछि माया बस्यो । उहाँ जहिल्यै ‘एस कि नो’ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, म बोल्दिनँ थिएँ ।
० घुम्न पनि जानुभयो होला नि ?
– मुस्किलले एकपटक फिल्म हेर्न गइयो । मेरा तीनजना जति साथी थिए, उहाँको पनि साथी थिए । फिल्म हलमा हामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरू अन्तै बसे । टच पनि नगरी फिल्म सकियो ।
– आईए पास भएपछि विवाह गरेकी थिएँ, यदि तिमीले राजनीति गर्ने हो भने कम्तीमा स्नातक गर्नुपर्छ भनेर कलेज पढ्न स्कुटी किनिदिनुभो । स्नातक सकेपछि अहिले मास्र्टस ज्वाइन गरेकी छु ।